भर्खरै आयो सि.के राउतको डरलाग्दो चेतावनी ! चुनावको बेला के हो यस्तो ? (भिडियो सहीत) « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
भर्खरै आयो सि.के राउतको डरलाग्दो चेतावनी ! चुनावको बेला के हो यस्तो ? (भिडियो सहीत)
देशमा प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधी सभा निर्वाचनको लागी केही घण्टा मात्र बाकी छ । ४५ जिल्लमा हुने निर्वाचनका लागी सम्पुर्ण तयारी समेत पुरा भइसकेको छ । मतदाताहरु मतदान गर्नका लागी उत्साहीत छन । तर यही समयमा अचानक एउटा बिषय चर्चामा आयो ।
देश टुक्राउने अभिब्यक्ति दिएर बारम्बार बिबादमा आइरहने सि.के राउतले चुनावको अघिल्लो रातमा आएर गम्भीर चेतावनी दिएका छन । फेसबुक बाट लाइभ गर्दै सि. के राउतले चुनावलाई नै धरापमा पार्ने गरी चेतावनी दिएका हुन ।
सि. के राउतको चेतावनीको भिडियो हेर्नुहोस :